10 qof ayaa ku dhimatay 13 kalena waa dhaawac weerar lagu qaaday gaari rakaab siday oo ku sii jeeday Jarriiban. – Radio Daljir
Juunyo 7, 2011 12:00 b 0
Balli-busle, June 07- Ugu yaraan 10 ayaa ku dhimatay 13 kalena waa ay ku dhaawacmeen kaddib markii dabley hubaysani ay waddo u galeen rasaasna ay huwiyeen gaari rakaab siday oo ku sii jeeday degmada Jarriiban ee gobolka Mudug.
Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa ahaa dad maata ah oo iskugu jira rag, haween iyo carruur aad u da’yar, waxaana lagu weeraray meel ku dhaw tuulada Balli-busle ee degmada Jarriiban fiidkii hore ee habeenimadii xalay.
Dhimashada iyo dhaawihii ka dhashay weerarka lagu qaaday gaarigaasi rakaabka ah ayaa la gaarsiiyey isla xalay tuulada Balli-busle halkaasi duubis iyo dawayn loogu sameeyey dhaawacyadii ka samata-baxay weerarkaasi.
Dableyda jid-gooyada dhintay ee xasuuqday dadka safrayey ayaa la tilmaamayaa in ay ka soo jeedaan dhinaca koonfureed ee gobolka Mudug ayna ku abtirsadaan maamulka Galmudug, halkaasi oo markii danbana ay u baxsadeen.
Gaariga la weeraray oo ahaa nooc baska loo yaqaanno ayaa shalay ka ambabaxay magaalada Galkacyo waxaana uu siday rakaab gaarayey 25 ruux, kuwaasi oo uu ka bad-baaday hal qof oo kaliya halka qof kalena la la’yahay meel uu jaan iyo cirib-dhigay inkastoo loo badinayo in ay afduubteen raggii weerarkaasi gaystay.
13 qof oo badankoodu qaba dhawacyo halis ah ayaa haatan lagu soo wadaa xarumaha caafimaadka ee magaalada Galkacyo si xaaladdooda loo tacaalo, sida uu idaacadda Daljir u xaqiijiyey nabaddoon Maxamuud Maxamed Kala-jaban oo ku sugan Balli-busle.
Xaalad kacsanaan ah ayaa laga dareemayaa deegaannada ay wax ka dhaceen iyo sidoo kale magaalada Galkacya-ba, waxaana dhinac kalena socda abaabul xooggan oo loogu diyaar-garoobayo dadka dhaawac ah ee lagu soo wado magaalada Galkacyo.
Ma ahan markii ugu horraysay oo sidaan oo kale jid-gooyo loogu dhigto lana weeraro dad iyo gaadiid ku safraya waddooyinka u isku xira Jarriiban iyo Galkacyo hase’ahaatee waa weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee deegaankaasi ka dhaca inta la xasuusto hal mar oo kaliya.
Dhacdadaan ayaa abuuraysa colaad hor leh, dhinaca kalena burburinaysa xasiloonidii iyo nabad ku wada-noolaanshihii dadyawga deegaannadaasi dariska ka ahaa, iyadoo sidoo kalena dhaawac weyn ku ah heshiiskii u dhaxeeyey Puntland iyo Galmudug.